IHuawei P Smart Z: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa | I-Androidsis
Zimbalwa iintsuku ezidlulileyo Iinkcukacha zokuqala malunga neHuawei P Smart Z zavuza. Yifowuni entsha yohlobo lwesiTshayina kuluhlu lwayo lokuqala oluphakathi. Nangona esi sixhobo simangalisa kuyilo lwaso, kuba iba yeyona fowuni yokuqala yophawu ekusebenziseni ikhamera erhoxiswayo. Le fowuni ekugqibeleni isemthethweni, emva kokuba ikhutshwe ngokusemthethweni kwiAmazon Italy.
Ke sele sinazo iinkcukacha ezipheleleyo zale fowuni. Inikwe njengenye indlela elungileyo kuluhlu oluphakathi lweprimiyamu, njengeP30 Lite. Ngaphezulu kwayo yonke loo nto, uyilo lwayo kunye nekhamera engaphambili iyarhoxa yile nto yenza le Huawei P Smart Z ibonakale. Yintoni esinokuyilindela kwifowuni?
Enkosi ngokusetyenziswa kwale khamera ibuyisa umva, ifowuni ibonisa uyilo lwesikrini sonke. Ke izakhelo zesikrini zibhityile kwaye zikuvumela ukuba uthathe ithuba elingaphambili lesixhobo ngale ndlela ibhetele. Ke yahluke kakhulu kwezinye iimodeli zohlobo lwaseTshayina malunga noku. Ukongeza ekulandeleni enye yeendlela zentengiso ezikhoyo kwi-Android.
1 Ukucaciswa kweHuawei P Smart Z
Ukucaciswa kweHuawei P Smart Z
Le Huawei P Smart Z idibana nezinto ezininzi esizibonayo namhlanje kuluhlu oluphakathi lweprimiyamu. Ngokukodwa iprosesa yayo yeyona nto inamandla kuyo. Iikhamera ziqhuba kakuhle kwaye ngokubanzi zishiya zineemvakalelo ezilungileyo. Ke sinokulindela imodeli elungileyo kweli candelo. Oku kukucaciswa kwayo ngokupheleleyo kwifowuni:
IsikriniI-6,59-intshi ye-LCD enesisombululo se-FullHD + (i-2.340 x 1.080 pixels) kunye ne-19,5: 9 ratio
Inkqubo: IKirin 710F
Ukugcina ngaphakathi: I-64 GB (Yandiswa ukuya kuthi ga kwi-512 GB ene-microSD)
Cámara trasera: 16 MP ngokuvula f / 1.8 + 2 MP
Ikhamera yangaphambili: 16 MP ngokuvula f / 2.2
Conectividad: Dual 4G, WiFi 5, Bluetooth 4.2, USB uhlobo C, 3,5mm Jack
Abanye: Umfundi ongasemva weminwe, Ukuvula ubuso, i-NFC
U bunzima: Iigram ezili-196,8
Ifowuni yongeza kwi-craze yangoku yezikrini ezinkulu, ngaphezulu kwe-intshi ye-6,5 kule meko. Uphawu lwaseTshayina lusebenzisa isikrini seLCD kwisixhobo, ngesisombululo esigcweleyo seHD +. Ngaphakathi sifumana iprosesa yaseKirin 710F, eza kunye ne-4/64 GB RAM kunye nokudityaniswa kokugcinwa. Ibhetri yenye yamandla esixhobo, esinamandla e-4.000 mAh kule meko, ethembisa ukuzimela okuhle. Ingakumbi ngokudibeneyo neprosesa yayo kunye nobukho bePie ye-Android kwifowuni.
IHuawei P Smart Z ifika nekhamera ngasemva kabini, 16 + 2 MP. Ayisiyonto inamandla ukushiya uphawu, kodwa ithembisa ngokusebenza kakuhle. Ukongeza, ngokwesiko lophawu, ubukrelekrele bokufakelwa bangeniswa kubo. Ngasemva kwefowuni sinenzwa yeminwe. Sikwanokuvula kobuso kwisixhobo. Sikwafumana i-NFC, ukuze sikwazi ukusebenzisa iintlawulo ezihambayo kuyo. Inqaku esingasoloko silibona kwiifowuni zohlobo lwaseTshayina.
Okwangoku, le Huawei P Smart Z sele ithengisiwe eAmazon Italy, nangona emva kweeyure ezimbalwa isusiwe. Kodwa enkosi koku kuye kwenzeka ukwazi ukuba isixhobo izakuphehlelelwa kweli nge-6 kaMeyi. Ke kuya kufuneka ulinde iintsuku ezimbalwa ukuze iphehlelelwe ngokusesikweni. Nangona okwangoku kungekho zinkcukacha zinikiweyo malunga nokuqaliswa kwezinye iimarike. Akufuneki ukuba kuthathe ixesha ukuba ibe semthethweni.
Sifumana ingxelo enye yefowuni ngokwe-RAM kunye nokugcinwa kwangaphakathi. Ngelixa inokuthengwa ngemibala eliqela: luhlaza okwesibhakabhaka, mnyama nokumnyama. Ke abasebenzisi banokukhetha ukhetho abaluthandayo malunga nesi sixhobo. Malunga nexabiso layo, iya kuba ngama-euro angama-279,90 e-Itali. Asazi ukuba iya kuba nexabiso elifanayo kwiimarike zonke, kodwa iya kufana nakweyiphi na imeko.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » IHuawei P Smart Z: IHuawei yokuqala enekhamera ebuyisekayo